Vibration Dampers Vagadziri & Vatengesi - China Vibration Dampers Fekitori
Vibration dampers anoshandiswa kutora aeolian kudedera kwe conductor yedzimotokari mitsara, pamwe nevhu waya, OPGW, uye ADSS. Mhepo-inokonzeresa kudedera kweanofambisa eiri inowanzoitika pasirese uye inogona kukonzera kuneta kwemufambisi padyo nechisungo chehardware. Ichadzora hupenyu hwebasa reADSS kana OPGW tambo.
Vibration dampers anoshandiswa zvakanyanya kudzora aeolian vibration yeADSS tambo uye pasi waya dzinosanganisira optical pasi tambo (OPGW). Kana iyo damper yakaiswa pane inodedera kondakita, kufamba kwehuremu kunogadzira kukotama kwetambo yesimbi. Kukombama kwetambo kunokonzeresa iyo yega tambo dzetambo kuti ikwirane pamwechete, nokudaro ichipedza simba.
Kune maviri marudzi eanowanzoitika vibration damper mu jera chigadzirwa renji
1) Yemweya vibration damper
2) Stockbridge vibration damper
Spiral Vibration Dampers inogadzirwa nemamiriro ekunze asingagadzirike, mapurasitiki asingakanganisi, madampers ane hombe, yakaumbirwa-damping chikamu chakakomberedzwa netambo, Uye iyo stockbridge vibration damper inogadzirwa nesimbi isina simbi, aluminium, uye simbi Hardware. Vibration damper mhando ichasarudzwa zvinoenderana neakasarudzika span uye conductor zvinodiwa.
Jera mutsetse unopa ese mafundo majoini netambo izvo zvinoshandiswa panguva yekumusoro FTTX network yekuvakisa, senge pole mabhureki, simbi dzesimbi tambo, zvikorekedzo, zvisungo, tambo inononoka kuchengetedza uye nezvimwe.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvi zvinyoro nyoro